Naqshad - Sichuan Aixiang Technology Co., ltd.
Iyada oo ku saleysan 15 sano oo waayo -aragnimo shaqo ee warshadaha aqalka dhirta lagu koriyo, waxaan haysannaa taageero farsamo oo dhammaystiran si aan u dhammaystirno noocyada kala duwan ee aqalka dhirta lagu koriyo.
Ujeeddada adeegsiga, haddii ay tahay aqalka dhirta lagu koriyo ee soo -saarka miraha iyo khudaarta, aqalka lagu koriyo cilmi -baarista abuurka, aqalka lagu koriyo ee dalxiiska iyo firaaqada, ama aqalka dhirta lagu koriyo ee loogu talagalay baahida beeritaanka shaqsiyeed, waxaan khibrad u leenahay naqshadeynta, wax soo saarka iyo dhismaha.
Marka la eego noocyada aqalka dhirta lagu koriyo, aqalka dhirta lagu madoobaado, aqalka dhirta lagu koriyo ee caagga ah, aqalka tunnel -ka, aqalka dhirta lagu koriyo ee PC, aqalka dhirta lagu koriyo ee galaaska, aqalka dhirta lagu koriyo, waxaan cusboonaysiinnay in ka badan toban nooc oo alaabtan ah
Injineer kasta wuxuu leeyahay ugu yaraan 10 sano oo waayo -aragnimo shaqo ah warshadaha aqalka dhirta lagu koriyo.
Waxay yaqaanaan halka ay ku taal xadka aqalka dhirta lagu koriyo. Sidaa darteed, barnaamij lagu koriyo oo la jaanqaada deegaanka deegaanka iyo cimilada saadaasha hawada ayaa la samayn karaa.
Guud ahaan, ka dib markii injineeradayadu heleen xog ku filan. Qorshaha aqalka dhirta lagu koriyo oo adiga kuu gaar ah ayaa laguu soo diri doonaa 1 toddobaad gudahood.
Waa maxay sababta ugu dhakhsaha badan. Tani wali waxay ku salaysan tahay waayo -aragnimadeena hodanka ah iyo kartida kala soocidda xogta ee kaamilka ah.
Bilowga wada xiriirkaaga iibiyahayaga, injineeradayadu waxay bilaabeen inay soo dhexgalaan mashruucan. Ilaa xaqiijinta qorshaha aqalka dhirta lagu koriyo.
Si loo caawiyo dadka inay dhisaan aqalka dhirta lagu koriyo oo fiican.
100,000 mitir murabac waxsoosaarka naqshadaynta mashruuca aqalka dhirta lagu koriyo
20,000 mitir oo laba jibbaaran Naqshadeynta mashruuca Greenhouse
60,000 mitir oo laba jibbaaran oo ah nashqad mashruuc cagaar cayn ah
qaabab kala duwan oo birta iftiinka ah lagu koriyo
Ka qalin jabiyay dugsiga deegaanka ee naqshadaha
Is-barasho inta lagu jiro shaqada oo aad hesho shahaadada qalin-jabinta
Barashada tiknoolajiyadda aqalka dhirta lagu koriyo ee Nederland inta aad noqonayso arday is -weydaarsi
Tirada mashaariicda ku lug leh
Tirada sawirka naqshadeynta